Jaaliyadda Somaliland ee Minnesota oo soo Dhaweyn Taariikhi ah Ku Qaabishey Wasiir Caddaani | Somaliland.Org
October 30, 2012	Jaaliyadda Somaliland ee Minnesota ayaa isugu yimid kulan isugu jira soo dhaweyn iyo xog wareysi oo ay u sameeyeen Wasiir Osman Sahardiid “Caddaani” oo booqasho gaaban ku soo gaaray gobolkan. Booqashadan oo lagu sheegay inay tahay mid shakhsiyadeed maadaama u Wasiirku ahaa nin deggan maagaladan inta aanuu Madaxweyne Siilaanyo u magacaabin golahiisa Wasiirada. Ugu horeyn goobtii laysugu yimid ayaa waxaa aayado qur’aan ku furay Sheekh Xasan Gaab. Erayadaa qur’aan ka ah ka dib, ayaa erayo soo dhaweyn ah oo runtii dadkii meesha isugu yimid qiiro gelisay ka akhriyey qaar ka mid ah odayaasha Jaaliyadda. Odayaashii halkaa ka Hadley waxaa ka mid ahaa Maax Isaaq iyo Ibraahim Aayo. Odayaashu waxay ku dheeraadeen taariikhda uu Wasiir Caddaani ku leeyahay dalkan Mareykanka, khaasatan gobolkan Minnesota oo uu jaaliyadda kaalin muhiim ah kaga jiray, runtiina ay sheegeen inay Jaaliyaddu aad u tabeen, laakiin bey yidhaahdeen ay isaga qanceen tan uu imika qaranka u hayo.
Wasiir Cismaan oo ahaa nin warkiisa aad loo sugayey ayaa si wadajir ah oo farxad weyni ka muuqato loogu soo dhaweeyey goobtii hadalka, halkaasoo uu Wasiirku dhankiisa ku qaabilay si farxad leh, ugana mahad-celiyey Jaaliyadda guud ahaan iyo intii soo abaabushay kulankaa balaaran ee isaga lagu soo dhaweynayey.
Wasiir Caddaani ayaa hadalkiisii ku billaabay “ waan ogahay wallaalayaal waa maaalin Axad ah, berina waa maalin shaqo, markaa ma doonayo innaan waqtiga idinka qaado, sida la ii sheegeyna dabcan hadalkeyga ka dib, waxaa jira su’aalo la i weydiin doono, markaa aan idiin billaabo hadalkeygii.” “Waa uun xog warran.” ayuu raaciyey Wasiir Caddaani.
Wasiirku waxuu hadalkiisa ku billabay in Somaliland maanta ay ku jirto xaalad barwaaqo, oo gees ka gees uu roob ka da’ay. Waxuu si faahfaahsan uga hadlay ujeedada shirkii golaha Wasiirada muddo uga socday Somaliland iyo barnaamijyada horumarinta ah ee ay xukuumaddu qabatay iyo kuwa ay qorsheyneyso inay ka hirgaliso dalka inta aanu waqtigeedu dhammaan. Wasiir Caddaani waxaa aad uga hadley arrimo badan oo Jaaliyaddu intooda badani aad ula dhaceen geedisocodka horumarineed iyo fursada dalka ka jira ee Wasiirku carabaabay. Waxyaabihii uu Wasiirku ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa howlaha adeega bulshada waxtarka u leh ee ay xukumadda Madaxweyne Siilaanyo dalka ka hirgelisay oo fara badan, gaar ahaan waxuu xusay Cisbitaalka Hargeysa oo la casriyeeyey. “Maanta haddii aad dooneyso innaad kelyaha lagaa sifeeyo (dialysis) uma baahnid innaad dhoofto, waxaa lagaaga sifeynayaa Hargeysa iyo waxyaabo kale oo ku soo kordhay. “Madaarada Hargeysa iyo Berbera waxay la tartami doonaan kuwa kale ee dunida markaad ka eegto casriyeynta ku socota, habeynta dakhliga dalka oo dib u habeyn lagu sameeyey keentayna inay dakhli badani soo xaroodo, xoolo dhoofinta oo sicir dejin macquul ah loo sameeyey kaasoo u daneynaya xoolo dhaqatada, waxbarashada dugsiyada hoose iyo dhexe oo lacag la’aan laga dhigay iyadoo ay dowladdu kabi doonto dugsiyada dalka, mushaharaad kordhin guud, baaris caalami ah oo xagga kheyraadka dalka ah, haddii ay ahaan laheyd shidaalka dalka ama macdanta kale ee dalka ka buuxda, fursadaha ganacsi ee World Bank kaa caawini karaan, fursadaha Somaliland Fund iyo muhiimadda ay dalka u leedahay” ayuu ka Hadley Cismaan Sahardiid, Wasiiru Dowlaha Maaliyadda ee Somaliland. Wasiir Caddaani oo dadku intooda badani ku xantaan inuu illaahey u dhaliyey “ codkarnimo” ayaa dadweynihii meesha isugu yimid ku qanciyey waxqabadka dowladda uu ka tirsan yahay, isla markaana ku casumay dhammaan Jaaliyadda mid joogey midaan jooginba inay gacan ka geystaan isbadelka socda maanta. “ Somaliland, wallaalayaal, waad ogtihiinoo lama aqoonsana, sharafta iyo sumcadda ay maanta dunida ku leedahayna waxay ku gaadhay inay isku tashato oo aaney cidina waxba ka sugin……………..Madaxweyne Siilaanyana taasuu horseed shaley ka ahaa, maanta hogaamiye ka yahay.” ayuu yiri Wasiir Cusmaan Sahardiid “Caddaani”
Wasiir Caddaani ayaa gebagabadii hadalkiisii ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kulankan ay u qabatay jaaliyaddu, waxuuse waano ahaan kula taliyey in la xoojiyo midnimada Jaaliyadda, hoggaan adagna loo sameeyo iyo xafiis cusub, sibuu yiri ay u xoogeysato waxqabadkooda iyo iska warqabkooduba, waxuuna u ballan qaaday inuu diyaar u yahay wax alla wixii shakhsi ahaan ama xukuumad ahaan ee ay uga soo baahdaan in lagu caawiyo.
Runtiina hadalkaa dardaaranka ahaa ee Wasiir Caddaani aad bey Jaaliyadda u gilgishay, waxay isla goobtaas ku go’aansadeen inaan meesha lagu kala tegin iyadoon taladaa Wasiirka wax laga qaban. Markii Wasiirku baxayna waxay odoyaashu ka taliyeen inaan lagu kala kicin meesha iyadoon waxba laga qaban dardaarankii Wasiir Caddaani. Waxaa isla goobtaa lagu magacaabey toddoba(7) xubnood oo noqonaya guddi soo dhisa habka ugu habboon ee loo soo dooran doono madaxda Jaaliyadda, shir guud oo laysugu yimaado marka hore, goobta iyo goorta la qabanayo doorashada & furitaankii xafiiska Jaaliyadda. Haddii markaa ay taasi dhacdano waxay noqoneysaa markii ugu horeysay ee Jaaliyadda Somaliland ee Minnesota yeelato xafiis daboola baahiyaha kala duwan ee jaaliyadda, taariikhdana gala.
Wasiir Cusmaan Saxardiid “Caddaani” oo meelaha qaar markaad tagto looga yaqaano “OBAMA” ayaad markaad weydiiso dadkaasi, gaar ahaan inta ah reer Minnisootadii hore, sababta ay magacaa ugu bixiyeen waxay kuu sheegayaan inuu Caddaani sida Obama siyaasadda meel hoose ka soo billaabay (community activist) iyo caawinta bulshada inta liidata isagoo adeegsanaya xirfaddiisa iyo hay’adihii kala duwanaa ee uu madaxda ka ahaan jiray gobolkan. Qaar uu shaqooyin la doono, qaar kale ee uu ka caawiyo helista guryo jaban oo ay ku noolaadaan, qaar uu ka caawiyey helista sharciga dalkan ….IWM.
Sidoo kale, Cusmaan Saxardiid “ Caddaani” magaciisu waxuu si gooniya u taabanayaa halgankii Somaliland soo gashey ee uu hormuudka ka ahaa ururkii SNM, ururkaasoo uu Caddaani u ahaa wakiilkiisii dalkan oo uu fadhigiisu ahaa Washington, D.C. Berigaa waxaa guddoomiye u ahaa SNM Madaxweyne Maxamud Axmed Maxamed “Siilaanyo” oo ay Caddaani halganka ku wada jireen maantana kuwada jiraan.
Dadweynaha xafladdaa ka soo qeyb galey marka laga reebo, waxaa iyaguna xusid mudan warbaahinta halkaa timid oo ay ka mid ahaayeen telefishinka qaranka Somaliland iyo wargeysyada ugu wayn gobolka ee African News Jouranal, Somalida Maanta Newspaper & Radio Somalida Maanta Minnesota.
Previous PostXisbiga UCID oo Dhoolatusyo waaweyn ka sameeyay Gobolada Somaliland oo dhanNext PostHa’yadda MSF oo Xoolo ugu deeqday Danyarta Burco	Blog